Maamulka Jubba oo Kismaayo ku soo bandhigay xubno dhalinyaro oo ka tirsan Al-shabaab – Radio Daljir
Maamulka Jubba oo Kismaayo ku soo bandhigay xubno dhalinyaro oo ka tirsan Al-shabaab
Nofeembar 12, 2013 4:31 b 0
Kismaayo, November 12, 2013 – Ciidamada maamulka KMG ah ee Jubba ayaa gacanta ku dhigay dhowr dhalinyaro ah oo ku eedaysan falal amni daro iyo abbaabulka qaraxyo ka dhaca Kismaayo, maamulka Jubba ayaa sheegay inay ka tirsan yihiin Al-shabaab.
Taliyaha saldhiga dhexe ee Kismaayo, waxaa uu sheegay in ay qabteen raggan oo lagu hayo walxaha qarxa, isla markaasna fulinayey weeraro balse laga hortagay, howl-galo ay ciidanka maamulka sameeyeen ayaa lagu soo qabtay.
?Raggan howl-galadii ugu dambeeyey ayaa lagu qaqabtay, qaarkood waxay qirsan yihiin inay ka tirsan yihiin kooxda Al-shabaab.? Ayuu yiri taliyaha saldhiga dhexe ee Kismaayo Maxamed Buulle Suugow.
Xubnaha ka tisan Al-shabaab ee maamulka Jubba soo bandhigay weli maxkamad lama saarin, ilaa haatan waxay ku xiran yihiin xabsiga dhexe ee magaalada Kismaayo, taliska booliska Kismaayo kama aysan hadlin xilliga maxkamada la horgaynayo.
Mudane Dirir ?rajo ayaan ka qabnaa in beesha caalamku maanta keento diyaarado gurmadka bixiya?